Home Wararka Jadwalkii doorashada been abuurka ahaa oo markale dib u dhac ku yimid!
Jadwalkii doorashada been abuurka ahaa oo markale dib u dhac ku yimid!
Dhawaan guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in Jadwalka doorashada ee golaha shacabka lasoo gabagabeyn doono 24ka bisha soo socota. Lama oga sida ay ku qabsoomi doonto doorashada golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Beesha caalamka ayaa ka digaysa in doorashooyinka golaha shacabka ay dib u dhacdo, taasi oo khal khal gelin karta howlaha amniga iyo u gargaaridda dadka tabaalaysan, sida lagu sheegay warsaxaafadeedka.